UNks Wadzanai Mafunga, owenza iziqu zobudokotela kwezomnotho wezolimo e-UKZN, udle umhlanganiso ngemva kokukhuluma emcimbini waminyaka yonke we-South African Sugar Technologists’ Association (i-SASTA) Congress.
Imiklomelo yethulwe eMhlanganweni wamiNyaka yoNke ye-SASTA e-Mount Edgecombe ngoMfumfu.
Esigabeni sezobunjiniyela nesezomnotho wolimo eNgqungqutheleni eyayingoNhlangulana, uMafunga ukhulume ngesihloko esithinta ukutshalwa nokukhula kwezinhlobo zomoba ezifundeni ezintathu endaweni yomoba yase-Eston nokuzwela kwabalimi ngezinqumo zomkhiqizo ngenxa yoshintsho emananini esiFundeni esiseNkabeni ye-Eston.
Enkulumweni yokuqala, uMafunga uhlabane ngendondo i-Kynoch Award ngenxa yephepha elivelele locwaningo engqungqutheleni, waklonyeliswa nge-SASTA Student Award for Agriculture. Usethubeni lokuhlabana nge-Jubilee Award (kwezoLimo) ezotholwa ngobhale iphepha elivelele locwaningo ezingqungqutheleni ze-SASTA zowezi-2019, 2020 nowezi-2021. Onqobile uzoxhaswa ngokuya eNgqungqutheleni ye-International Society of Sugar Cane Technologists e-Hyderabad, eNdiya, ngoZibandlela wezi-2022.
Amajaji aphawule ngephepha lokuqala ancoma ukuhambisana kahle kocwaningo nokuxhumana nabalimi, athi leli phepha belixukuza ugebhezi, lishaya khona, futhi lithulwe kahle. Aqhube athi leli phepha liwumkhombandlela wokuthi ucwaningo lwangomuso olufuze lolu lungenziwa kanjani.
Iphepha lesibili libe yisisekelo sephepha locwaningo olushicilelwe ephephabhukwini uShukela oshicilelweni lwangoNhlangulana, olwanikwa izithunywa ezingama-500 engqungqutheleni obelulandisa ngokuthi abalimi bangazivikela kanjani emananini aphezulu okunyuka kwezindleko zokukhiqiza umoba.
La maphepha asuselwa ocwaningweni uMafunga alwenzela izifundo zakhe zobudokotela, olubheka umphumela wokushintsha kwezigayo zikashukela zibe yizindawo zomkhiqizo owongayo nongacekeli phansi imvelo. Usebenza ngaphansi kweso elibukhali likaDkt Stuart Ferrer kwezoMnotho wezoLimo nele-Sugar Milling Research Institute/National Research Foundation SARChI Research Chair in Sugarcane Biorefining.
UMafunga, owenza unyaka wokugcina ezifundweni zobudokotela, uthe izigayo eziningi kule mboni ethwele kanzima sezikhiqiza ushukela nama-molasses, kanti abalimi sebehlomula ngalo mkhiqizo kuphela. Ucwaninga indaba yokushintshela kwezigayo kwezinye izinto ukuzama ukuphucula isimo senzuzo eyehlayo nokuthi loku kusho ukuthini emapulazini nasezigayweni.
UMafunga wenza iziqu ze-master's ezindleleni zokwenza umkhiqizo ngezinto ezongayo nezingacekeli imvelo phansi ngaphambi kokudlulela ezifundweni zobudokotela e-School of Agricultural, Earth and Environmental Sciences. Uneziqu i-Master's in Business Administration zase-National University of Science and Technology, eZimbabwe, ngemva kokuthola iziqu zokuqala ne-Honours kwezoMnotho wezoLimo zase-University of Zimbabwe.
UMafunga uncelisa amawele phakathi kokunakekela umndeni wakhe nezifundo zakhe njengoba lo mama wendodakazi eneminyaka eyishumi namawele aneminyaka emine azalwa ngenkathi esafunda, esebenza nomyeni wakhe, uMnu Collin Yobe, naye owenza iziqu zobudokotela kwezoMnotho wezoLimo e-UKZN.